कलियुगका कुरा: खजुरीमा विद्यालय पक्की भवन
काली टाइम्स सम्वाददाता
तम्सारिया फाउण्डेसन अफ निदरलैण्ड र कुमारी प्राथमिक विद्यालय हसौराको आर्थिक सहयोगबाट खजुरीमा कामधेनु प्रा.वि. मा पाँच वटा पक्कि कोठा बनेका छन् । कुमारी प्रा.वि. हसौराका प्रधानाध्यापक फरसुराम शर्माले गत माघ १८ गते विद्यालयमा थप पक्कि कोठा बनाउने कामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
विद्यालय भवन निर्माणमा स्थानीय जनश्रमदानको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको विद्यालयका प्र.अ. रामचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो